१० वर्षिय बालकले १३ वर्षिया किशोरीलाई गर्भवती बनाएपछी… - माडी खबर
माडी खबर calendar_today १५ कार्तिक २०७८, 7:31 am
काठमाडौं । महिला पुरुष कुन समयदेखि बच्चा जन्माउन थाल्छन्। कस्तो बेला गर्भ रहन्छ? अधिकांश किशोर, किशोरीको जिज्ञासा हो। अब किशोरी त पहिलो महिनावारी पछि गर्भ बसाउन तयार हुन्छे। तर पुरुषको सन्तान उत्पादनको क्षमता कहिले देखि सुरु हुन्छ? यो खासै एकिनको बिषय छैन।